Isbadalka cimilada wuxuu badalayaa imaatinka Spain ee '' shimbiraha naadirka ah '' | Saadaasha Shabakadda
Xayawaanada oo dhami waxay had iyo jeer raadiyaan meesha ugufiican ee ay iskaga ilaaliyaan dhaxanta ama kuleylka. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay waqti ku qaataan meel aad uga fog halka ay ku nool yihiin, laakiin kolba marka celceliska heer kulka adduunku sii kordhayo, habdhaqankoodu wuu is beddelaa, sida ku dhacaya "shimbiraha naadirka ah" ee yimaada Spain.
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee ka soo baxda guddiga kala duwanaanshaha SEO / BirdLife, oo lagu daabacay joornaalka sayniska ee 'Ardeola', noocyada wareegga wareegga ayaa aad u yaraanaya, halka noocyada Afrika ay yihiin, liddi ku ah, aad u badan.
Wixii SEO / BirdLife, isbeddelkan ay shimbiraha woqooyi la kulmaan wuxuu la xiriiraa jiilaalka jilicsan ee jilicsan, iyo midka bilaabaya in lagu arko noocyada koonfureed ee leh kululaynta sii kordheysa ee Badweynta Atlaantik. Sidaa darteed, tusaale ahaan, bulbul liinta (Pycnonotus barbatus), Qeybinta Afrika, waxay ku taallay Tarifa, halkaas oo ay ka bilaabatay soo saariddeeda, iyo cirifka lugta cas (Sula sula), shimbiraha badda ee u dhashay Kariibiyaanka, ayaa bilaabay inuu yimaado qaybtan adduunka ka mid ah.
Xogta ay soo bandhigtay warbixinta, oo u dhiganta noocyada la arkay sanadkii 2015, "waa mid muhiim ah oo walwal leh", waxayna u oggolaaneysaa gabagabada in laga soo saaro saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay deegaanka iyo, gaar ahaan, shimbiraha.
Shimbiraha waa xayawaan, sida kuwa kale, haddii xaaladaha deegaankoodu hagaagaan ay go'aansadaan inay sii joogaan. Waana taas, dhaqaalaha tamarta ayaa aasaas u ah noolaha. Sababtaas awgeed, liiska SEO / BirdLife ee noocyada shimbiraha dhifka ah waxay u badan tahay inay koraan kolba sannadaha ka dambeeya heer kulkuna uu sii kordhayo, haddii dabcan tallaabooyin wax ku ool ah oo dhab ah loo qaado si loo xakameeyo isbeddelka cimilada.
Hadaad rabto inaad aqriso warbixinta, waad awoodaa halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Isbedelka Cimilada wuxuu beddelaa imaatinka Spain ee ”shimbiro naadir ah”